Iindaba - Izinto eziluncedo ngeSinyithi Pipe Welding Machine
Umatshini wokwenza umbhobho wesinyithi osetyenziselwa ukuhambisa umbhobho usetyenziselwa inkqubo yokwenza okungapheliyo kweentsimbi ezingenanto kunye neeparbon zentsimbi, ezinje ngeenxa zonke, isikwere, iiprofayili, kunye nemibhobho edityanisiweyo, eveliswa ngokungadibanisi, ukwenza, ukuwelda iargon arc, ukugoba umthungo wokugaya, ukulungisa , ukusika, kunye nezinye iinkqubo.
Umbhobho izixhobo welding - Stainless intsimbi umbhobho ukuwelda umatshini sisixhobo esingundoqo kwimveliso imveliso ukuwelda umbhobho, ukhetho yayo ibisoloko inkxalabo abatyali. Ungayikhetha njani into yokuba umatshini wentsimbi osuka ekumgangatho ophezulu ongenanto Landela izibonelelo zokufumana, kufanelekile.
1. Ukuveliswa kwemveliso: Kweli xesha lanamhlanje lokunqongophala kwabasebenzi, umatshini wombhobho wokunyusa umbhobho wentsimbi ongenanto, oomatshini abazisebenzisayo ukugcina indawo enkulu kakhulu yeendleko zabasebenzi, ukuphelisa uxinzelelo kuqeqesho lweetalente.
2. Uzinzo: kokukhona kungcono uzinzo kumatshini wombhobho wentsimbi ongenasici, kokukhona unokuqina kwaye womelele. Ukuzinza kugqitywa yimathiriyeli, kwaye izinto ezikumgangatho ophezulu zokuvelisa izixhobo zikumgangatho ophantsi azinakuthelekiswa. Umatshini wensimbi ongenasici wokuhambisa umbhobho uhambelana nomgangatho wezinto, wenze iimveliso ezisemgangathweni, onoxanduva lwabathengi njengoxanduva lwabo, umthengi kuqala, ukwenza imeko yokuphumelela.
3. Ukusebenza okuphezulu: ukusebenza kakuhle yenye yeenzuzo zemveliso yomatshini wensimbi owenziwe ngentsimbi engenasici. Kodwa isiseko solu ncedo kukuba umgangatho womatshini kunye nokubumba kuqinisekisiwe, ukunciphisa imeko yolondolozo kunye nokulungiswa, kwaye ke ukusebenza kwemveliso kuya kuphucula ngokwendalo.
Umgangatho ubalulekile kwizixhobo; igqiba inqanaba lemveliso egqityiweyo. Umgangatho wentsimbi yokwenza umatshini wokwenza umbhobho uhambelana nomgca wokuvelisa kumgca wokuvelisa, khetha ngokucophelela! Inkonzo epheleleyo inokukunceda usombulule iingxaki ezininzi zemveliso kwaye wenze utyalomali endleleni kakuhle. Njengengcali kwishishini, sixelele iingxaki zakho, masisombulule iingxaki kwaye sikunikeze inkonzo eyonelisayo.